Bit By Bit - Ikamva - 7.2.1 Ukudibanisa ama-readymades kunye neenkomfa
Isicwangciso esilungileyo esilungile okanye isicwangciso esilungileyo sokulondolozwa ngokupheleleyo sisebenzisa ngokupheleleyo ubuchule beminyaka yobudijithali. Kwixesha elizayo siza kudala ii-hybrids.
Kwisingeniso, ndahlukisana nesimbolo esilungeleyo sikaMarcel Duchamp ngesitayela se-Michelangelo. Oku kwahlukileyo kwathatha ummahluko phakathi koozinzulu beenkcukacha, abavame ukusebenza kunye nama-preparedmades, kunye nososayensi bezenhlalakahle, abavame ukusebenzisana ne-custommades. Kwixesha elizayo, ke, ndilindele ukuba siza kubona amaxwebhu amaninzi ngenxa yokuba enye yeendlela ezicocekileyo zikhawulelwe. Abaphandi abafuna ukusebenzisa i-readymades kuphela baya kulwa kuba akukho baninzi abahle balungileyo kwihlabathi. Abaphandi abafuna ukusebenzisa kuphela i-custommades, ngakwelinye icala, baya kuhlawulela umlinganiselo. Iimpawu ze-Hybrid, kodwa ke, zingadibanisa isixa esiza kunye nama-readymades ngokufanelekileyo phakathi kombuzo kunye nedatha evela kwi-custommades.
Sibone imimiselo yale mibabi kwi ngasinye sahluko ezine. KwiSahluko sesi-2, sibone indlela i-Google Flu Trends edibanisa ngayo i-data-system esebenzayo (imibuzo yokukhangela) kunye nenkqubo yemilinganiselo yenkcubeko yemveli (i-CDC ye-floral system surveillance system) ukuvelisa uqikelelo olukhawulezayo (Ginsberg et al. 2009) . Kwisahluko sesi-3, sabona indlela uStephen Ansolabehere no-Eitan Hersh (2012) badibanisa idatha yenkwenkwezi eyenziwa ngokweenkcukacha kunye nolwazi olulungisiweyo lwezolawulo loorhulumente ukwenzela ukuba bafunde kabanzi malunga neempawu zabantu abavotayo. KwiSahluko 4, sabona indlela ukuhlolwa kweZakhono ezidibanisa ngayo izixhobo zokumisela ugesi ngokulungelelanisa ukunyanga iimeko zokuhlala ezizigidi zabantu (Allcott 2015) . Ekugqibeleni, kwisahluko sesi-5, sabona indlela uKenneth Benoit kunye nabalingane bakhe (2016) basebenzise inkqubo yokuqhelana neenkcukacha zabantu kunye neenkampani zezopolitiko ukwenzela ukudala idatha abaphandi abanokuyisebenzisa ukuze bafunde iinguqu zeengxoxo zengxoxo.
Le mizekelo emine ibonisa ukuba isicwangciso esinamandla kwixesha elizayo siza kuphucula imithombo ebanzi yedatha, engadalwanga uphando, ngolwazi olungakumbi olwenza ukuba lufaneleke ngakumbi uphando (Groves 2011) . Ingaba iqala ngokugqithisa okanye ukulungelelanisa, isitayela sesi-hybrid sinesithembiso esikhulu kwiingxaki ezininzi zophando.